Avy amin’ny tsara sitrapo no nahafantarana fa misy andian-jiolahy miisa efatra mikononkonona hanao fanafihana mitam-piadiana eny amin’iny faritra Ambohipo iny. Rehefa naheno izany ny polisy dia nanao ny fanadihadiana ary niezaka nanara-maso. Naharitra herinandro ny fanaraha-maso natao azy ireo. Omaly alatsinainy 25 febroary no voatondro fa hanaovan’izy ireo ny ketrika eny Ambohipo ao amin’ny toeram-pivarotana iray. Rehefa tonga teny Ambohipo ireto jiolahy dia tsikaritr’izy ireo fa misy manaraka ka nirifatra nitsoaka avy hatrany. Raikitra ny fifanenjehana nanomboka teny Ambohipo, nihazo an’Ambolokandrina, ary tonga teny Antsobolo, Ambatomaro. Nitondra basy poleta sy sabatra moa ireto jiolahy ka nitifitra ny polisy avy hatrany rehefa tonga teny Ambatomaro. Raikitra ny fifandonana teo. Vokany, voatifitry ny polisy ny jiolahy roa ka naratra mafy, tafatsoaka kosa ny roa ambiny. Nentina tany amin’ny hopitaly moa ireo voatifitra saingy tsy tana ny ainy. Fantatra fa efa mpanao fanafihana mitam-piadiana eny amin’ny boriborintany fahatelo iny izy ireo.